बुटवलमै ! पानी भरेको निहुँमा दलित गर्भवति महिलामाथी निर्घात कुटपिट-Nagarikaawaj.com
बुटवलमै ! पानी भरेको निहुँमा दलित गर्भवति महिलामाथी निर्घात कुटपिट
मङ्लबार, जेष्ठ ६, २०७१
बुटवल । – घटना वुटवलकै हो । तर घटना घटेको एक हप्तापछि मात्रै रहस्य सार्वजनिक भएको छ । धारामा पानी भरेको निहुँमा वुटवलमा गर्भवती दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको खवर एक हप्तापछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
बुटवल ४ मैनाबगर श्रीरामटोल निवासी विष्णु क्षेत्री र उनका दुई छोरी जुना र सोनीले सोही ठाउँमा भाडा गरि बस्ने बर्ष १८ की सविता विश्वकर्मालाई बेहोस हुने गरि कुटपिट गरेको जनाईएको छ ।
बैशाख ३१ गते राती साढे आठ बजेतिर धारामा पानी भर्न जाँदा “कमनी भएर चाँडै पानी भर्न पाइन्छ” भन्दै एक्कासी नौ महिनाको गर्भ रहेको सविताको पेटमा गार्गिले हिर्काएको पिडीतले वताएका छन ।
विष्णु क्षेत्रीको जेठी छोरी जुनाले पेटमा गार्गीले र आमा र अर्की छोरी सोनीले कपाल लुछालुछ गरेर बेहोस बनाएको पिडीत परिवारले वताएका छ ।
घाईते सवितालाई तुरुन्तै लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल उपचारका लागि लगिएपनि त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि राती १ बजे भैरहवा मेडीकल कलेजमा उपचार गराउन लगिएको थियो ।
पहिल्यैदेखि भाडामा बस्ने भएकाले हेप्ने,सानो जात हो हामीले भनेको मान्नुपर्छ,कामी दमाईलाई यहाँ बस्न दिनौं भन्दै धम्काउने गरेको पिडीतले वताईन । सविताको पेटमा रहेको बच्चालाई चोट लागेको मेडिकल रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
पिडितले यो घटनामा जातीय भेदभाव छुवाछुत तथा कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार उजुरी दिएको खण्डमा क्षत्रीलाई एक बर्षदेखि तीन बर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय वुटवलले यस वारेमा अनुसन्धान भैरहेको र पिडकलाई चाडै कार्वाही हुने जानकारी दिएको छ ।